राम्रो बानी बसाउने ६ वटा सामान्य तरिका
ठूला सपना पूरा गर्न, आफूले चाहेको आवश्यकतालाई परिभाषित गर्नुपर्छ र कसरी हासिल गर्ने पूरा चित्र बनाउनु पर्छ । हामीले जे काम गर्छौं, हेर्दा त्यसको उति महत्व नहुन सक्छ । हामीले ध्यानपूर्वक हाम्रो कामलाई नहेरेका हुन सक्छौं । तर हरेक दिन हामीले गरिरहेका कामले नै हाम्रो अद्वितीय बानी (ह्याबिट) बनेको हुन सक्छ । हामीले जे काम दोहोर्याई तेहोर्याई गर्छौं, त्यही काम हाम्रो बानी बन्न...
श्रीमती महिनावारी हुँदा श्रीमानले गर्नुहोस् यस्ता १० काम
महिनावारीको क्रममा महिलामा विभिन्न शारिरिक र मानसिक परिवर्तन हुने गर्दछ । यो क्रममा महिलाले आफ्नो पुरुष पार्टनरसँग सहयोग र सहानुभूतीको आशा गर्दछन् र आशा अनुरुप नतिजा पाए महिलाहरुको आधा पीडा कम हुने गर्दछ । महिनावारीको क्रममा के गर्ने पुरुष ? बम्बे हस्पिटलकी गायनोकोलोजिस्ट डा. निरजा पौराणिकका अनुसार पुरुषले महिला महिनावारी हुँदा फोहोर वा असामान्य गतिविधीको रुपमा...
उपेन्द्र यादवको उमेर १७ बर्ष मात्र !
संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवको नागरिकतामा उमेर १७ बर्ष मात्र उल्लेख गरिएको छ ।भगतपुर सप्तरी जन्मिएका भनिएका यादवको स्थायी बासस्थान सुनसरी भएकाले उनले सुनसरीबाट नागरिकता लिएको बताइएको छ ।नागरिकतामा उमेरको ठाँउमा साल, महिना, गते नभएर १७ बर्ष मात्र लेखिएको छ । यसले उनको उमेर अब पनि १७ बर्ष मात्र हो की कहिलेसम्म १७ बर्ष भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । यादबको...
ट्रक दुर्घटनामा पाँच भारतीय नागरिक घाइते
बागलुङ, कात्तिक २१ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डस्थित बडीगाड गाउँपालिका२ मा आज बिहान भएको ट्रक दुर्घटनामा परी पाँचजना घाइते भएका छन् । रमाइलो मेलाका सामग्री बाकेर ग्वालीचौरतर्फ हिँडेको ना ३ ख ३७८५ नम्बरको ट्रक लब्धीखोला पुल नजिकै दुर्घटनामा परेको हो ।दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उद्धारपश्चात् स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।घाइते...
पतिले धोका दिएको तथ्य उडिरहेको विमान मै थाहा पाएपछि....
चेन्नई, कात्तिक २१ । ३३ हजार फिटको उचाईमा उडिरहेको विमानमै एक महिलाले आफूलाई पतिले धोका दिइरहेको थापा पाएपछि विमानलाई नै आकस्मिक अवतरण गराएकी छन् । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार इरानकी ती महिला कतार एयरवेजको विमानबाट आफ्नो पतिसँगै यात्रा गर्दै थिइन् । आइतबार दोहाबाट इन्डोनेसियाको बालीतर्फ गइरहेको सो विमान उडेको केही समयपछि नै ती महिलाले आफ्नो पति निदाएको मौका छोपेर उनको...
तपाई हामीमध्ये कतिपय भुटेका मकैका पारखी छौँ होला । भुटेको मकैको स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा गर्छ । यी हुन भुटेका मकैका फाईदा ! १. भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ । भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन् । २. भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रर्याप्त हुने भएकोले शरिरमा हड्डीलाई मजबुत...
टिप्स | तपाई-हामी सबैको बानि उठेपछी सबै भन्दा पहिला मुख धुँने गरिन्छ । स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि पनि हामीले दैनिक रुपमा मुख धुने काम गर्नैपर्छ । यसरी दैनिक रुपमा पटक-पटक गरिने यो काममा पनि हामीले धेरै गल्ती गरिरहेका हुन्छौ । यसरी मुख धुँदा हामी कसैले पनि धेरै कुराहरु याद नै गरिरहेका हुँदैनौ । जसको परिणाम स्वरुप विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी असर गरिरहेको हुन्छ । अब हामी मुख...
‘युवतीको छाती सुमसुम्याएर’ मात्र भबिष्य बताउने यी अच्चमका ज्योतिष !
जो आफ्नो वर्तमानमा चलेको समयदेखि असन्तुस्ट हुन्छन या भनौं विरक्त प्रायः त्यस्ता मानिस आफ्नो भविष्य कस्तो होला भन्ने विषयमा जिज्ञासु हुन्छन् । मानवले प्राचिनकाल देखि ‘भविष्यका बारेमा जान्ने’ अनेक खालका तरिकाहरू प्रचलनमा ल्याइएका छन् जसमा हात हेर्ने, जन्म कुण्डलिनी हेर्न लगायतका अनेक तरिका छन् । तर एउटा अनौठा ज्योतिषी भेटिएका छन् जो महिलाहरूको भविष्य जान्नका लागि...
आजको जमानामा मोबाइल फोनविनाको जीवन अधुरो नै हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । मोबाइल जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । खाली समय मिल्यो कि गोजीबाट मोबाइल फोन निकालेर इन्टरनेट खोलिहाल्छौँ हामी । सायद मानिसले मोबाइल फोन नचलाउने त्यस्तो कुनै ठाउँ नै छैन, चाहे त्यो शौचालय होस् वा अन्तरंग कार्य गरिरहेको शयन कक्ष । एक नयाँ तथ्यांक अनुसार, ४० प्रतिशत युवायुवतीहरुले आफ्नो अफिसको बाथरुममा समेत...